हिमाल खबरपत्रिका | बर्खाअघि बलियो बास
कुरा राम्रै सुनिन्छ, शहरी कानले। प्राधिकरण नेतृत्वको पछिल्लो सक्रियता पनि हेर्नलायकै छ, तर कुरा भरपर्दो भएन। किनभने, प्राधिकरणले चाहेर मात्र सबै कुरा मिल्दैन। यो बुझेरै होला, आगामी बर्खाअघि सबैतिर स्थायी घर सम्भव छैन भन्दैछन् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली। अर्थात्, भूकम्पपीडित लाखौं नेपालीले थप एक बर्खा र एक हिउँद टीनका तपतपे टहरामै दिनरात काटेर सरकारलाई 'सहयोग' गरिदिनुपर्ने भो।
उनीहरूको मत छ– 'सरकारले पैसा, नक्शा र इन्जिनियर दिन्छ भने चाँडो पठाओस्, हैन भने एकतले, सानो घरलाई जानेको जे जस्तो सीप छ, त्यसैबाटै बर्खाअघि ओत बनाउने हो। यहाँ आफू र बालबच्चालाई चितुवाले घिसार्ला भन्ने डर छ। त्यसमाथि, लडेका घरका काठपात कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ। दुई लाख नगद र शहरको इन्जिनियर कुरेर कहिलेसम्म अलपत्र पर्ने? पैसोभन्दा मान्छेको ज्यान ठूलो भन्ने कुरा सरकारले बुझोस्।'
गाउँहरूमा घर पुनःनिर्माणका लागि सरकारले 'क्याटलग' बनाएको छ, जसमा १७ थरीको नक्शा छ। प्रचलित भवन संहिता पालना हुने हिसाबले बनाइएको घरका ती नक्शालाई व्यवहारमा उतार्दा भूकम्पीय जोखिमसँग जुध्न सकिन्छ। नक्शामा गाउँठाउँका निर्माण सामग्रीबाटै बन्ने घरको डिजाइन छ। तर के नक्शाले नेपाली गाउँघरको बसोबास पद्धति र जातजाति अनुसारको शैलीको सम्मान गरेको छ त? अबको नेपाली गाउँघरको सम्पूर्णता त्यही १७ थरी नक्शा हो? गाउँको मौलिक वास्तुकला बाँच्नु पर्दैन? प्रकोप भनेको भुईंचालो मात्रै हो?